'क्याप्टेन अमेरिका' लाई मनपर्छ अर्कै सुपरहिरो! :: Setopati
'क्याप्टेन अमेरिका' लाई मनपर्छ अर्कै सुपरहिरो!
एजेन्सी असार ४
'क्याप्टेन अमेरिका' को पात्रले परिचित हलिउड अभिनेता क्रिस इभान्सले आफ्नो बाल्यकालमा मनपर्ने सुपरहिरो आफूले निर्वाह गरेको पात्र नभई अरु नै रहेको बताएका छन्।
आठ वर्षदेखि यता थुप्रै मार्भल फिल्ममा 'क्याप्टेन अमेरिका' बनेर अभिनय गर्दै आएका क्रिसले सानामा आफू भने अर्कै सुपरहिरोबाट प्रभावित भएको बताएका हुन्।
अमेरिका म्यागेजिन स्टाइलसँगको एक अन्तर्वार्तामा उनले 'स्पाइडरम्यान' आफ्नो बाल्यकालको भएको बताएका हुन्।
उनले भने, 'मलाई क्याप्टेन अमेरिका बनेकोमा खुसी छ। तर, स्पाइडरम्यानको भूमिका पाएको भए म पक्कै पनि ठूला भवनमा टासिँदै एकबाट अर्कोमा जाने दृश्यहरू गर्न खुसी हुने थिएँ। सानोमा मेरो सपना त्यही थियो।'
यसैमा क्रिसले थपेका छन्, 'तर म स्पाइडरम्यानको मास्क लगाउन रुचाउँदिन थिएँ होला। म उकुसमुकुस भएर बस्न सक्दिँन, त्यसैले दिनभर सुटिङमा स्पाइडरम्यानको लुगा र मास्क लगाउन मलाई गाह्रो हुने थियो। मेरा लागि 'क्याप्टेन अमेरिका'को लुगा नै ठिक छ।'
उनले सन् २०११ मा मार्भल सिनेमाटिक यूनिभर्सबाट 'क्याप्टेन अमेरिका'को रुपमा पहिलो एभेन्जर भएर आफ्नो सुपरहिरो करिअर सुरु गरेका थिए। सन् २०१९ मा 'इन्डगेम' सम्म आइपुग्दा उनको भूमिका उत्तिकै रुचाइएको थियो। तै पनि सुरुमा यो भूमिकाको रुपमा खेल्ने सोच उनका लागि सजिलो विकल्प थिएन।
'बाहिर धेरै घुलमिल हुने स्वभाव नभएकोले मलाई सडकमा हिँड्दा पनि सबैले चिन्ने कुराको निकै चिन्ता लागेको थियो,' उनी भन्छन्, 'तर योभन्दा ठूलो चिन्ता चाहिँ मेरो जीवनको करिब दस वर्ष एउटै भूमिका खेलेर बित्दै थियो र मैले लामो समय सम्झौताको प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने थियो। त्यो सजिलो निर्णय थिएन, तर म अब यसबाट खुसी छु।'
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार ४, २०७७, ०३:०५:००
६० वर्षीय गोरे डोरीमा भिर चढ्छन्, मह काढेर हजारौंमा बेच्छन् (भिडिओ)
अख्तियार आयुक्त पाठकलाई ७० लाख घुस दिने लम्बोदर न्यौपाने पक्राउ
कलिलैमा निमोठियो गुलाबको प्रहरी बन्ने सपना
रहेनन् सात बोन्ड फिल्म खेलेका शन कन्नेरी
फेरि सर्‍यो 'नो टाइम टु डाइ', अर्को वर्ष अप्रिलमा रिलिज हुने
जसले महिला कलाकारले सम्मानजनक पारिश्रमिक पाओस् भनेर आफ्नो पारिश्रमिक कटौती गरे
अभिनेता रोबर्ट प्याटिन्सनलाई कोरोनाको संक्रमण, रोकियो 'द ब्याटम्यान'को सुटिङ
हलिउड अभिनेता 'द रक' को पूरै परिवारलाई भयो कोरोना
रहेनन् 'ब्ल्याक प्यान्थर' अभिनेता चाडविक बोसम्यान